RW Rooble oo raacdeeyay Cabdisiciid Muuse | KEYDMEDIA ENGLISH
RW Rooble oo raacdeeyay Cabdisiciid Muuse
Ra'iisal Wasaaraha Soomaaliya, ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday, go’aan ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ku fasaxday Markab waday dhuxul sharci daro, waxuuna shaqo ka joojin ku sameeyay Wasiirkii Wasaaraddaas.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa shaqada ka joojiyay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Cabdisiciid Muuse Cali, kadib markii ay ku caddaatay inuu fasaxay markab siday dhuxul si sharci darro ah looga dhoofiyay Soomaaliya oo ku xiran xeebaha dalka Cummaan.
Ra’iisul Wasaaraha Rooble, wuxuu buriyay (baabi'iyay) Warqadaha Summadahoodu kala yihiin: REF: MFA/FRS/DA/4284/2022, ee ku taariikheysan 21/05/2022 iyo REF: MFA/FRS/DA/3992/2022 ee ku taariikheysan 10/05/2022, oo Wasaaradda Arrimaha Dibaddu ku fasaxday markab siday dhuxusha sharci darrada ah.
Sidoo kale, xafiiska Hantidhowraha Qaranka iyo Hay'adaha amnigu, ayuu ku amray in ay baaritaan ku sameeyaan falkan iyo sidii uu u dhacay ayna u gudbiyaan hay'daha garsoorka ee ku shaqada leh, si loola xisaabtamo Cabdisiciid, oo maraakiib dhuxul ah ka raray Kismaayo billowgii sanadkaan, maalmo kadib markii loo dhiibay xilka.
Cabdisiciid, oo ugu horreeya, shaqsiyaadka siyaasadda ugu jira, xooleysiga, kooxeysiga iyo kala aarsiga, ayaa la aaminsan yahay inuu muddo qeyb ka ahaa kooxaha xaalufiya dhirta Soomaaliya, waxaana u sii dheer, inuu qeyb ka ahaa, shaqsiyaad Farmaajo u adeegayay shantii sano ee la soo dhaafay, qeybna ka ahaa mushkiladihii dalka.
“Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu shaqada ka joojiyay Wasiirka Arrimaha dibadda XFS, Cabdisaciid Muuse Cali laga bilaabo 24/05/2022”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Shalay ayay ahayd, markii ay bannaanka u soo baxday, Waraaq ku taariikeysan 14/05/2022, oo uu ku saxiixan yahay Ra’iisul Wasaare Rooble, taas Cabdisiciid, lagu wargaliyay in laga bilaabo 1 Janaayo 2022, shaqaalaha Dowladda ee la beddelay ama shaqada laga qaaday aanay waafaqsaneyn go’aankii Golaha Wasiirrada.